ဆာကူရာရဲ့ပုံရိပ်ဟာ တကယ်ပဲကြောက်ဖို့ကောင်းသလား? ခွဲခွာခြင်းနှင့် သေဆုံးခြင်းကို ခံစားရစေတာဟာ ဘာကြောင့်လဲ? - JAPO Japanese News
ဆာကူရာရဲ့ပုံရိပ်ဟာ တကယ်ပဲကြောက်ဖို့ကောင်းသလား? ခွဲခွာခြင်းနှင့် သေဆုံးခြင်းကို ခံစားရစေတာဟာ ဘာကြောင့်လဲ?
လာ 17 Jan 2022, 15:45 ညနေ
နိုင်ငံခြားသားတွေ ဂျပန်ကိုလာတဲ့အကြောင်းရင်းထဲကတစ်ခုကတော့ ဆာကူပန်းကိုကြည့်ချင်ကြပါသတဲ့…
အထူးသဖြင့် ဂျပန်မှာအမျိုးအစားပြုပြင်ထားတဲ့ဆာကူရာ၊ Yoshino Cherry ဆိုတဲ့အမျိုးအစားဟာ အတော်လေးထူးခြားတဲ့ ပန်းဖြစ်ပါတယ်။
အရောင်မှာ ပန်းရောင်ဖျော့ဖျော့လေးရှိတဲ့ အဖြူရောင်ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပြီး အရွက်မထွက်လာခင်မှာ ပန်းအရင်ပွင့်တဲ့အတွက်၊ စိတ်ကူးယဉ်ရှုခင်းတစ်ခုလို ခံစားရစေပါတယ်။ ဒီအပြင် ပန်းကလည်း တစ်ခဏအတွင်းမှာ တိုက်ခက်လာတဲ့လေနဲ့လွင့်ပါသွားကြပေမဲ့၊ ထိုလွင့်ပါသွားပုံမှာလည်း အဆွေးဓါတ်ခံရှိသူအဖို့တော့ ပြည့်စုံတဲ့မြင်ကွင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
ပန်းတွေမှာ ၎င်းရဲ့ပုံရိပ်နဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ ပန်းဘာသာစကားကို ပေးတတ်ကြပေမဲ့၊ ဒါဖြင့် ဆာကူရာဆိုရင်ရော ဘာတွေရှိမလဲ?
အမေရိကန်ရဲ့ ပထမဆုံး သမ္မတဝါရှင်တန်ဟာ ဖခင်ဖြစ်သူရဲ့ ဆာကူရာပန်းပင်ကို ခုတ်ပစ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကို ကြားဖူးကြပါသလား?
ရိုးသားစွာပြောဆိုခြင်း ဆိုတဲ့ ဇာတ်ကွက်လှလှလေးကနေ ဆင်းသက်လာပါတယ်။
မိန်းမဆန်ပြီး၊ ကျက်သရေရှိမှုဟာ အကောင်းဆုံးလို့ထင်ပါတယ်။ ဒါကလည်း ကောင်းတဲ့ဘာသာစကားပဲ။
ကြွေကျသွားတဲ့ပန်းရဲ့ပုံရိပ်ဟာ ခွဲခွာခြင်းကို ပုံဖော်စေတယ်နော်။
အနည်းငယ် တွယ်ကပ်ခြင်းလို့ပြောရမှာထက်၊ စောင့်ကြည့်နေမယ့်လက္ခဏာ တွေ့ရပါတယ်။
ပန်းဘာသာစကားဟာ အမှန်တော့ဒီလိုပုံစံနဲ့ အဲ့ဒီလောက် ဆိုးရွားတဲ့ပုံရိပ်မရှိပါဘူး။
ဒါပေမဲ့ ဂျပန်မှာတော့ “ ခွဲခွာခြင်း” “ သေဆုံးခြင်း” ဆိုတဲ့ပုံရိပ်ဟာ အတော်လေးပြင်းထန်ပါတယ်။
မူလက ဂျပန်မှာ ဆာကူရာဟာ နိမိတ်မကောင်းစေတဲ့အရာလို့ သတ်မှတ်ခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်။
古事記（こじき）ဆိုတဲ့ ဂျပန့်ရှေးအကျဆုံးစာအုပ်ထဲမှာတော့ ဆာကူရာကိုမွေးဖွားခဲ့တဲ့ နတ်သမီး 木花開耶姫（このはなのさくやひめ）ဟာ ထွက်လာခဲ့ပေမဲ့၊ သူမဟာ သက်တမ်းတိုတိုပဲနေခဲ့ရတဲ့ အကြောင်းအရာကနေ၊ ဆာကူရာဟာ အသက်တိုခြင်း→သေဆုံးခြင်းနှင့်ခွဲခွာခြင်း။ ဆိုတဲ့ယူဆချက်ထွက်ပေါ်လာပါတော့တယ်။
၁၂၀၀ ခုနှစ်လောက်ကနေ ဂျပန်ဒေသအသီးသီးမှာ ဆာကူရာကိုကြည့်တဲ့ ယဉ်ကျေးမှုစတင်ထွက်ပေါ်လာပြီး၊ အဲဒိုခေတ်မှာ မျက်မှောက်ခေတ်ဂျပန်ဆာကူရာရဲ့ပုံရိပ်ဖြစ်လာပြီး၊ Yoshino cherry ဆိုတဲ့အမျိုးစား ထွက်ပေါ်လာပါတော့တယ်။
ဒါပေမဲ့၊ အရင်ခေတ်က “ သေခြင်း” ကိုအမှတ်ရစေတဲ့ပုံရိပ်ဟာ ပျောက်ပြက်မသွားဘဲ၊ ဝိညာဉ်တွေကိုလဲလျောင်းစေဖို့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ အများအားဖြင့် စိုက်ပျိုးလာကြတယ်။
ဘုရားကျောင်းနဲ့ သင်္ချိုင်းအနီးအနားမှာ ဆာကူရာပင်အကြီးကြီးတွေရှိနေတာကလည်း ထိုပုံရိပ်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ပြီး တိုကျို Kudan မှာရှိနေတဲ့ Yasukuni Shrine (靖国神社) နတ်ကွန်းဟာ တိုင်းပြည်အတွက်အသက်စတေးသွားတဲ့လူတွေကို ဝတ်ပြုတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။
စစ်ပွဲကာလအတွင်း၊ “ Yasukuni ရဲ့ဆာကူရာအပင်အောက်မှာဆုံကြမယ်” ဆိုတဲ့စကားကို စစ်သားတော်တော်များများပြောခဲ့ကြတယ်။ ဒါဟာသေဆုံးခဲ့ရင် အဲ့ဒီနေရာမှာပြန်တွေ့ကြမယ်လို့ အဓိပ္ပါယ်ရပြီး “ သေခြင်း” ကိုကောက်နုတ်ထားတဲ့ ပုံရိပ်ဖြစ်ပါတယ်။
ဂျပန်ရှိ ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းသော ဆာကူရာဟာ Yoshino cherry အမျိုးအစားပါ။
သို့သော် အမှန်က လူလုပ်ထားတဲ့အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး၊ သဘာဝအတိုင်း စိုက်ပျိုးလို့မရပါဘူး။
ဥယျာဉ်မှူးရဲ့လက်နဲ့လိုက်ပြီး၊ စိုက်ပျိုးခြင်းဖြတ်တောက်ခြင်းဖြင့် တိုးပွားလာတာကြောင့် Yoshino ချယ်ရီပင်အားလုံးနီးပါးမှာ ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်း DNA တူကြပါတယ်။
ထူးခြားမှုနဲ့ အခြားသောအပင်မှာမရှိတဲ့လှပမှုကို ပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။
ဒီအပြင် လေထဲမှာကခုန်ရင်း တစ်ခဏလေးအတွင်း လွင့်ပါကြွေကျပြီး ပြီးဆုံးသွားပုံတို့က ရောနှောနေတဲ့အတွက်၊ “ သေခြင်း” နဲ့ “ ခွဲခွာခြင်း” ပုံရိပ်ကိုဖြစ်လာစေတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
နိမိတ်မကောင်းတဲ့ပုံရိပ်ရှိပေမဲ့လည်း၊ ချမ်းအေးတဲ့ဆောင်းရာသီကုန်ဆုံးခြင်းကို ပြောပြပေးတဲ့ဆာကူရာကို မြင်လိုက်ရချိန်တိုင်း ဖြစ်လာတဲ့ဝမ်းသာမှုက ဂျပန်မှာနှစ်ပေါင်းရာနဲ့ချီနေလည်း ရိုးမသွားတဲ့ မြင်ကွင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
ဆာကူရာပန်းတွေကို တခြားနိုင်ငံမှာတွေ့နိုင်ပေမယ့် ဂျပန်နိုင်ငံနဲ့ လုံးဝမတူပါဘူး
၃ သိန်း ၈ သောင်းသော နေကြာပန်းခင်း , Himawari !!!!!
အမေရိကန်ရဲ့အမျိုးသားသီချင်းကို အမိုက်စား ROCK ဂီတနဲ့ ဂုဏ်ပြုပေးလိုက်တဲ့ ဂျပန်သံအမတ် !!!!!
နှစ် ၃၀၀ မတိုင်ခင်က စာပို့သမား
မာနထောင်လွှားမှုကြောင့် သေဆုံးပြီးနောက်ရုပ်အလောင်းကိုတောင် အဖက်လုပ်မခံရတဲ့ အချောဆုံးမိန်းကလေး Ono no Komachi
Mamaya ရဲ့ဟင်းချက်နည်းသင်ခန်းစာ အပိုင်း ၄ !!!!